မန်စီမြို့နယ် အတွင်း ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သော သစ်တန် ၁ဝဝဝ ကျော်ကို မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းသို့ လွှဲပြော?? - Yangon Media Group
မန်စီမြို့နယ် အတွင်း ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သော သစ်တန် ၁ဝဝဝ ကျော်ကို မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းသို့ လွှဲပြော??
ရေစကြို၊ မေ ၇
မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း ဗန်းမော်သစ်ထုတ်ရေးဌာနအနေဖြင့် ဇန်နဝါရီလမှ ဧပြီလအထိ မန်စီမြို့နယ်တစ်ခုအတွင်း ဖမ်းဆီးသစ်တန် တစ်ထောင် ကျော်ကို မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းသို့ လွှဲပြောင်းလက်ခံခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဇန်နဝါရီလတွင် ကျွန်းခွဲသား ၃၁၁၅၉ လုံး (၄၄၅ ဒသမ ၉၉၉၂) တန်၊ တမလန်းဓားရွေ(၁၁ဝ)လုံး (၂ ဒသမ ၃၂၈၄)တန်၊ ဖေဖော် ဝါရီလတွင် ကျွန်းခွဲသား ၃၁၉၆၅ လုံး (၄၇၆ ဒသမ ၁၄၂၆)တန်၊ ဧပြီလတွင် ကျွန်းသစ်လုံး ၁၇ဝ (၂၅ ဒသမ ၄၉၂ဝ)တန်၊ ကျွန်းခွဲ သား ၃၈၆၅ လုံး (၆၇ ဒသမ ၃၄၄၈)တန် လွှဲအပ်လက်ခံခဲ့ပြီး မတ်လအတွင်း ဖမ်းဆီးသစ်လွှဲ ပြောင်းခြင်းမရှိဘဲ အဆိုပါဖမ်းဆီး သစ်စုစုပေါင်း(၁ဝ၁၇ ဒသမ ၃ဝ၇ဝ) တန်မှာ မဒယန်ကျေးရွာ၊ ချောင်း ထောက်ကျေးရွာနှင့် ဖြုတ်ကုတ် အစရှိသည့် မန်စီမြို့နယ်အတွင်း မှ ဖမ်းဆီးရမိသည့်သစ်များဖြစ်ကာ ရွှေကူမြို့နယ်နှင့် မိုးမောက်မြို့နယ် အတွင်း ဖမ်းဆီးသစ်များ မပါဝင် ကြောင်း သိရသည်။
”သစ်တောကနေ သစ်ထုတ် ရေးလွှဲတယ်၊ သစ်ထုတ်ရေးကနေ ပြည်တွင်းရောင်း/စက်(ပြည်တွင်း ရောင်းဝယ်ရေးနှင့်သစ်စက်ဌာန)ကို ဆက်လွှဲတယ်၊ ပြည်တွင်းရောင်း/ စက်ကနေ လပ်ပုံပုံပြီး လေလံပစ်တယ်။ သစ်အတန်းအစားကောင်းတဲ့ဟာက ရန်ကုန်မှာ လေလံပစ်တယ်။ ကျန်တဲ့ဟာတော့ ကချင် ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားမှာ ပစ်တယ်။ ပြည်နယ်လေလံဆိုရင်တော့ ရောင်း/ စက်ကနေ ရုံးချုပ်ကို ပြည်နယ် လေလံပစ်ခွင့်တောင်းရတယ်။ ခွင့် ပြုချက်ရမှ လေလံပစ်ရပါတယ်” ဟု မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း ဗန်းမော် သစ်ထုတ်ရေးဌာနမှ လက်ထောက် အထွေထွေမန်နေဂျာ ဦးသိန်းဇော်လင်းက ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ ပြောသည်။
မန်စီမြို့နယ် သစ်တောဦးစီးဌာနမှ လွှဲပြောင်းပေးသည့်သစ်များအား ဗန်းမော်သစ်ထုတ်ရေးဌာနပိုင် မော်တော်ယာဉ်များဖြင့် ကားတိုက်သယ်ဆောင်ကာ ဗန်းမော် မြို့ အမှတ်(၇၉)သစ်စက်ဝင်းသို့ သယ်ယူစုပုံခဲ့ကာ အထက်ညွှန် ကြားချက်နှင့်အညီ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။ ဗန်းမော်သစ်ထုတ်ရေးဌာနသည် ဖမ်းဆီးသစ်များ လက်ခံသယ်ယူခြင်းအပြင် ဌာနထုတ်သစ်အဖြစ် (၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈)ဘဏ္ဍာ ရေးနှစ်၌ ရွှေကူမြို့နယ် နမ့်ဖားကြိုးဝိုင်းနှင့် စက္ကလာကြိုးဝိုင်းတို့မှ သစ်မာ ၉၇၂၇ တန် ထုတ်လုပ်ကား တိုက်သယ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ဖောင်ဖွဲ့ရေးသို့ လွှဲပြောင်းအပ်နှံခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဋ္ဌမတန်း အောင်မြင်သူများ အစိုးရနည်းပညာ အထက်တန်းကျောင်း စတင်လျှောက်ထားနိုင်
”အနုပညာလောကကို ဝင်ခါစက လက်တွဲ ခေါ်မယ့်သူ မရှိခဲ့ဘူး” လို့ ဆိုတဲ့ ထက်ထက်ထွန်း
ချစ်သူများနေ့ မတိုင်ခင် အယ်လ်ဘမ်အသစ် ဖြန့်ချိမယ်လို့ အရီနာဂရန်ဒီ အရိပ်အမြွက်ပြော
သေနတ်သမား ကြည်လင်းနှင့် ပါဝင်ပတ်သက်သူများ အထူးတရားရုံးသို့ ရုံးထုတ်